एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्नुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काको भनाई « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ११ असोज । संयुक्त राष्ट्रसंघको अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी परिमार्जन नगरी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले एमसीसीबाट अनुदान आफूहरुले मागेको पनि स्मरण गराए । उनले सबैको सहमति भयो भने यसलाई अगाडि बढाउने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सोसल मिडियाले तल्लो लेभलमा प्रचार भएको छ । म मेरो जिल्लामा जाँदापनि एमसीसी पारित गर्नहुँदैन भन्छन् । माईतीघर मण्डलामा एमसीसी पारित गर्यौ भने खबरदार भन्ने नारा लाग्छ ।’-Photo Source: Nepali SharGop/Facebook Page